Miyuu fashilmay Barnaamjika ‘Nabad Ku Afur’? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Miyuu fashilmay Barnaamjika ‘Nabad Ku Afur’?
3rd July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Waxay u muuqataa inuu fashilmay barnaamijka ay dowladda Soomaaliya uga dhawaaqday Muqdisho, kaasoo loogu talagalay in amaanka caasimadda lagu sugo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, iyadoo Alshabaab horay ugu hanjabeen weeraro dheeraad ah.
Maanta bisha Ramadaan waa 5, maalmihii 1-aad, 2-aad iyo 3-aad waxey Alshabaab Muqdisho ku dileen dhowr ka mid ah askarta iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Shalay oo 4 aheyd lama sheegin wax dil ah oo ka dhacay Mqudisho, laakiin maanta oo Ramadaan yahay 5 ayaa la dilay xildhibaan, 2 askari, waxaana la dhaawacay xildhibaan iyo mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka Soomaaliya.
Meelaha dilalka ugu badan ka dhaceen waxey cajabka geliyaan dadka, waxey kala ahaayeen Wadada Makka Almukarrama meel aan ka fogeyn saldhiga booliska Waabari, degmada Xamarweyne agagaarka sladhiga booliska Afar Irdood iyo Isogoyska Afarta Jardiino oo qaar ka mid ah ciidamadii deganaa barqo cad la toogtay, lagana baxsaday.
Afhayeen u hadlay xarakada Al-Shabaabul ayaa sheegay in ciidankooda gaarka ah ee ka Howlgala magaalada Muqdisho ay weerarkaasi geysteen.
“Ciidanka mujaahidiinta ayaa Muqdisho ku khaarijiyay, mid kalane wey dhaawaceen ilaah baa ku mahadsan howlgalladuna way sii socan doonaan” ayuu yiri afhayeen Shabaab katirsan oo warbaahinta lahadlay.
C/Caziiz Abuu Muscab Afhayeenka ciidanka Al Shabaab iyo Cali Maxamed Xuseen (Jabal) ayaa labaduba bilawgii Ramadaanka ku goodiyay in Muqdisho ay ku dili doonaan shisheeyaha iyo saraakiisha DF-ka, waxeyna 5-tii maalmood ee la soo dhaafay dileen dad aan yareyn oo dowladd u shaqeynayey, uuna ka mid yahay xildhibaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo laamahaa amaanka ayaa iyaguna horay u shaaciyey howlgal lagu sugayo ammaanka caasimadda oo loogu magac daray “Nabad Ku Afur”. Lama sheegin ilaa hadda ay u qabteen dilalkiii dhacay, waxaa lagu ekaaday “Baaritaan ayaa socoda”.
Marka ay hadlayaan mas’uuliyiinta dowladdu waxey sheegayaan inuu si habsami leh u socdo howlgalka “Nabad Ku Afur”, hase ahaatee waxaa socday weerarada Alshabaab fulinayaan, marka waxaa la dhihii karaa ‘Alshabaab wey ka dhabeeyeen hanjabaadoodii, dowladduna kuma guulyesan iney iska difaacdo’.
RW C/weli: Waan xoojin doonaa beegsiga kuwa caadeystay daadinta dhiigga
Mareykanka oo cambaareeyey dilkii xildhibaan Xeyd